Home Wararka Muwaadiniin Soomaali ah lagu qabtay Waddada isku xirta magaallooyinka Garissa iyo Thika
Muwaadiniin Soomaali ah lagu qabtay Waddada isku xirta magaallooyinka Garissa iyo Thika
Sida ay sheegayaan Wararka ka imaanaya dalka kenya, Toddobo qof oo Soomaali ah ayaa shalay lagu qabtay Waddada Weyn ee isku xirta magaallooyinka Garissa iyo Thika ee dalkaasi, xilli ay ku sii jeedeen magaalladda Nairobi.
Dhanka kale, Taliyaha Boliska ee Faraca Dhexe ee Gobal-Hoosaaadka Mwingi, Peter Mutuma oo la hadlay Suxufiyiinta ayaa sheegay in dadkaasi la qabtay, xilli ay Hay’adaha isku-dhafka ee Ammaanka hawlgal ka wadeen Jid-weynaha isku xira Thika iyo Garissa.
Taliyaha waxa uu soo bandhigay Magacyada 3-qof oo ka mid ah 7-da qof ee Soomaalida ee la qabtay, kuwaasi oo uu magacyadooda ku soo koobay:
1- C/Casiis oo 22-jir ah,
2- Fatuma Sahra oo 29-jir ah,
3- Saalim Shukri Sheekh oo 17-jir ah, kuwaasi oo haatan lagu hayo Saldhigga Boliska Mwingi.
Waxa uu intaasi ku daray in Afarta qof ee kale ee la qabtay ay yihiin carruur ay da’dooda ka hosoeyso 10-jir.
Dhinaca kale, Taliye Peter Mutuma waxa uu tilmaamay in dadka Soomaalida ee la qabtay loo gudbin doono Maxkamadda Mwingi Court, iyadoo lagu soo oogi doono inay si sharci-darro ah ku joogeen gudaha Kenya.
Saraakiisha Ammaanka Kenya waxay tuhunsan yihiin in 7-da qof ee Soomaalida ee la qabtay ay Kenya ka soo galeen xuduudka Somalia, iyagoo ka soo gudbay Xuduudka Dhadhaab.